သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာကရင်နီကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
ကရင်နီ (မြန်မာပြည်): သင့်ရဲ့ကရင်နီကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံနားလည်ခြင်း
Springfield အတွက်ကရင်နီမိန်းကလေးအက, MA – 137ကရင်နီအမျိုးသားနေ့ကြိမ်မြောက်. Kayahland ထံမှဓာတ်ပုံ.
မြန်မာပြည် (မြန်မာ) ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်, 1950 ကတည်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖိနှိပ်မှုနှင့်တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခ.
မြန်မာနိုင်ငံကျော်ပါဝင်သည် 100 ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများ, အဆိုပါလူသိအများဆုံးအချို့တို့သည်ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ကရင်, ကရင်နီ, ကချင်, ရှမ်း, Rohinyan, နှင့်မွန်ပြည်နယ်. ကရင်နီကရင်နီပြည်နယ်မှာနေထိုင်, ထောင်နှင့်ချီထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာများမှာ.
ကရင်နီ, မြန်မာ, နှင့်အင်္ဂလိပ်
အားလုံးစခန်းများတွင်မူလတန်းရှိသည်နှင့်, အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ, အလယ်တန်းသို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်း. သူတို့အခမဲ့ကြောင့်စခန်းတွေမှာအများစုကကျောင်းသားများကိုကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန်. ဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှရေးဆွဲဆရာများအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကအလွန်ကျိုးနွံလစာပေးဆောင်နေကြ. ဆရာများပုံမှန်အားလေ့ကျင့်သင်ကြားကြသည်မဟုတ်. နိုင်ငံတကာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျောင်းသားများကို '' အင်္ဂလိပ်လိုအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပေမဲ့သေချာပေါက်ခြုံငုံပညာရေးစနစ်အပေါ်ရေရှည်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. စခန်းအခြေအနေများ-တို့အတွက်, ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အဆောက်အ, စာအုပ်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ-စေတဲ့စိန်ခေါ်မှုသင်ယူခြင်းနှင့်ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်အတော်လေးမြင့်မားသောကျောင်းထွက်နှုန်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတစ်နာတာရှည်ရှားပါးမှု. ထို့အပြင်, ဘွဲ့ရသူကျောင်းသားများအတွက်နေဆဲအလုပ်လုပ်နိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်ကတည်းကအလုပ်အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်းအဟောင်းသားတို့တှငျအပညာရေး၏တန်ဖိုးကိုအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလျှော့ချထားသည်.
နှောင်းပိုင်း UNHCR ကထွက်သယ်ဆောင်စစ်တမ်းများမှာတော့ 2005 နှင့် 2006 ထက်ပိုပြီး၏ 6,000 အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချလျှောက်ထားတဲ့သူအရွယ်ရောက်ပြီးသူကရင်နီဒုက္ခသည်များ, အကြောင်းကိုသုံးပုံနှစ်ပုံမူလတန်းလက်ခံရရှိပြီးလျှင်သိရသည်, အလယ်တန်း, သို့မဟုတ်အလယ်တန်းပညာရေး, ခန့်သုံးပုံတစ်ပုံမျှပညာရေးကိုလက်ခံရရှိဘဲလျက်အစီရင်ခံခဲ့သည်. ထက်နည်းပါးလာ 100 ကလူသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းသို့မဟုတ်တက်ရောက်ခဲ့သည်တက္ကသိုလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်.
ကရင်နီအကူအညီတောငျးဖွယ်ရှိမဟုတ်, သူတို့ကလိုအပ်လျှင်ပင်. သငျသညျစသညျကျောင်းများထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပေးအသိုင်းအဝိုင်းအေဂျင်စီများမှရည်ညွှန်းပေးနိုငျပါလျှင်၎င်းသည်မိသားစုများကိုကူညီလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအရင်းအမြစ်များကိုရှင်းပြရန်သေချာစေပါမည်သည့်မိသားစုမှမရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးသင်သည်သူတို့၏ကျောင်းသားသို့မဟုတ်မိသားစုထွက် singling ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း.
ကရင်နီရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမိဘများမှအကြီးအကဲများနှင့်တာဝန်လေးစားမှုအပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုနေရာ. ကရင်နီခေါင်းစဉ်အားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖြေရှင်းလေ့, ထိုကဲ့သို့သော "အန်တီ" သို့မဟုတ်အဖြစ် "ဦးလေး။ " သင် ပေး. သူတို့ကိုဤလမ်း addressing အားဖြင့်မိဘများအတွက်လေးစားမှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော "အန်တီ Bathesheba ။ " အဖြစ်
ကရင်နီအလွန်အသိုင်းအဝိုင်းများမှာ- နှင့်မိသားစု-အာရုံစူးစိုက်. ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များကမကြာခဏတိုးချဲ့မိသားစုဝင်များအဖြစ်ယူဆနေကြသည်. US မှာကရင်နီဒုက္ခသည်များအလွန်အမင်း၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုတန်ဖိုးထားဆက်လက်, နှင့်ကရင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမြင့်မားသူတို့ရဲ့အစဉ်အလာများနှင့်လွတ်လပ်ရေးတန်ဖိုးထား. မိသားစုများထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးကရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြီးကျောင်းအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောရိုးရာကခုန်သင်ပေးဖို့အသိုင်းအဝိုင်းခေါင်းဆောင်များတောင်းဆိုနေတာအဖြစ်. များစွာသောဒုက္ခသည်များမောင်းထုတ်ရန်ပုံကိုသိတစ်ခုသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ကင်းမဲ့ကြဘူးဆိုတာကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်က, ဒါကြောင့်ကျောင်းကဖြစ်ရပ်များမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ကရင်နီအစဉ်အလာနတ်ကိုးကွယ်ကြသည်, အဘယ်သူကိုအများအပြားခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းပေမယ့်ဝိညာဉ်ကိုအစိုးရချော့မြှူအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့မူရင်းနတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုစနစ်အားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပါပြီ, အရာထုံးတမ်းနှင့်အပူဇော်သောယဇ်အမျိုးမျိုးလိုအပ်ပါတယ်. ကရင်နီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအသက်ဝိညာဉ်၏နံပါတ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုယုံကြည်, တိုင်ကြား, ထိုသို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလှနျအရေးကွီးကွောငျး တိုင်ကြား, အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များပြေးကြလိမ့်မယ်အရာ (တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းပြိုကွဲနှင့် ဆက်စပ်., ဥပမာ).
မိဘများကလေးများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းပြုစုပျိုးထောင်ဘို့တာဝန်ဝေမျှ, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားပုံမှန်အားအများပြည်သူမှဆုံးဖြတ်ချက်များ communicate နှင့်မိသားစုများ၏ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်. သူတို့ဇနီး၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလျှင်ကရင်လူတို့အပျေါကိုငုံ့ကြည့်သို့မဟုတ် teased စေခြင်းငှါ. ယင်းစခန်းများရှိ, သို့သော်, အမျိုးသမီးအုပ်စုများအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ. သူတို့စခန်းခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်မှာအမြိုးသမီးမြားရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတွန်း, မိန်းမတို့အဘို့ပညာရေးနှင့်အလုပ်အခွင့်အလမ်းများမြှင့်တင်ရန်, နှင့်အများအပြားအားနည်းချက်အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ထောက်ခံမှုပေး, ထိုကဲ့သို့သောမိဘမဲ့အဖြစ်, မုတ်ဆိုးမတို့ကို, နှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏သားကောင်များ.
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကကရင်နီကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် ကရင်နီသင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.